La soco WWDC 2017 Muhiimka ah toos ula soco Wararka iPhone | Wararka IPhone
Toos ula soco WWDC 2017 Dood-wadaag muhiim ah iPhone News
Luis Padilla | | macruufka, Noticias
Wax walba waa diyaar waana Isniinta, Juun 5 laga bilaabo 19:00 fiidnimo (waqtiga jasiiradda Spain) waxaan awoodi doonnaa inaan ogaanno dhammaan wararka Apple ay noo diyaarisay la softiweerkaaga sanadkaan. Soo bandhigida macruufka 11, watchOS 4, macOS 10.13 iyo tvOS 11 ayaa bilaaban doonta waqtigaas waxaan arki doonaa hadii Apple ugu danbeyntii go'aansado inuu siiyo macruufka wejiga wanaagsan oo ka faa'iideysanaya dhamaan ilaha iyo awooda ay leeyihiin hada xarumaha, hadii ay ku dar waxyaabo ku cusub macOS ama haddii watchOS 4 ugu dambayntii uu helo dukaan waji duug ah ama muuqaalo caafimaad ama muuqaal kormeer caafimaad oo dheeri ah. Ma rabtaa inaad si toos ah u ogaato wax kasta oo Apple ay na tusi doonto ee Muhiimka u ah WWDC 2017? Hagaag, Actualidad iPhone waxaan ku haynaa wax walba oo diyaar u ah inaan kuu sheegno inaad ku nooshahay.
WWDC 2017 waxay aasaaska u dhigi doontaa nidaamyada hawlgalka ee ku imaan doona iPhone, iPad, Mac, Appel Watch iyo Apple TV laga bilaabo bisha Sebtember. Qeybta koowaad ee Isniinta, Apple waxay noo sheegi doontaa dhammaan wararka ku saabsan cusbooneysiintan cusubi waxay keeneysaa, qalabkee la jaan qaadaya iyaga sidoo kale waxaan awoodi doonnaa inaan aragno shaqooyinka cusub ee ay ku darayaan ficil ahaan. Laakiin ma ahan oo keliya software-ka inuu noqon doono mowduuca, maxaa yeelay waxaa jiray hadal hayn badan oo ku saabsan 10,5-inch iPad Pro ah oo lagu soo bandhigi karo Muhiimadan, iyo afhayeen leh Siri isku dhafan. qaabka ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Amazon Echo'. Siri ma qaan gaadhayaa oo ma noqon karaa kaaliye waxtar leh oo aan doonayno inaan ku haysanno gees walba oo guriga ka mid ah?
Blog Toosan WWDC 2017
Isniinta waxaan yeelan doonaa shaki, laga bilaabo 19:00 fiidnimo waqtiga gacanka Isbaanishka. Daaqaddaan waxaad ka arki kartaa wax kasta oo Apple noo soo bandhigto, Isbaanish iyo toos ah, sidoo kale waxaad ka qaybqaadan kartaa faallooyinkaaga. Uma baahnid inaad ka walwasho cusbooneysiinta biraawsarka maxaa yeelay daaqadda ayaa cusbooneysiin doonta waxyaabaha ku saabsan qulqulka. Haddii aad rabto inaad is-qorto si aan kuu ogeysiinno markay wax walba bilaabmaan, waxaad ku sameyn kartaa emayl xilligan. Dhamaantiin waan idin sugeynaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Toos ula soco WWDC 2017 Dood-wadaag muhiim ah iPhone News
Microsoft ayaa qorsheyneysa Qorsheeye ku shaqeeya IOS si aad si fudud ugu abaabuli karto
Apple waxay lacag siisaa kuwa ka caawiya hagaajinta barnaamijka Khariidadaha